Lowo owake waba ngumeluleki we-FDA ufuna ukuthi kuvinjelwe ukuhlinzwa kwe-LASIK - BGR - T mov RELAY
Accueil » ISAYENSI Lowo owake waba ngumeluleki we-FDA ufuna ukuvinjelwa kokuhlinzwa kwe-LASIK - BGR
I-LASIK ngenye yezindlela zamehlo ezaziwa kakhulu. Phambilini ngentengo evimbela, ukuhlinzwa ngeso laser manje kushibhile kakhulu kunakuqala, futhi iziguli zivame ukuhlupheka kakhulu ngemuva kwalokho. Abantu abaningi bayayithanda imiphumela yabo, kepha lokho akusho ukuthi azikho izinkinga, kwesinye isikhathi kube nezinkinga ezinkulu kwezinye izimo.
Manje usengumeluleki wakudala obesebenza neFood and Drug Administration wavota ukuvumela i-LASIK njengenqubo yezokwelapha, kubonisa ukuthi i-FDA ayinaki idatha ephakamisa ukuthi i-LASIK kufanele ivinjelwe. Njengoba kubikiwe Izindaba ze-CBS UMorris Waxler uzisola ngokuvunyelwa kwakhe kwangaphambili kwe-LASIK futhi ucela umphakathi wezokwelapha ukuthi uphinde uhlaziye ubungozi obukhona.
Noma iyiphi inqubo yezokwelapha inengozi ethile, kepha i-Waxler ithi izinga lokuxinwa ngemuva kokuhlinzwa kwe-LASIK liphakeme kakhulu kunalokho okufanele kwamukeleke. Ezinye iziguli ziye zabika umbono ophindwe kabili kanye "nezinkanyezi", okuyinto ecasulayo, zivame ukukhanyiswa ebusuku.
Lapho udokotela enza inqubo ye-LASIK, i-laser isetshenziselwa ukuqamba kabusha i-cornea. Lokhu kungalungisa izinkinga zokubona ezijwayelekile njenge-myopia, ebizodinga ngenye indlela i-lens noma izingilazi. Kuvunyelwe okokuqala ku-1998 futhi imisebenzi eminingi ye-LASIK yenziwe kusukela lapho.
U-Waxler uthi lokho, kuncike ekuhlaziyweni kwakhe siqu kwamanani okunciphisa, phakathi kwe-10% ne-30% yeziguli kunemiphumela emibi yesikhathi eside. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi lezi zibalo nakanjani azizona "ezisemthethweni" nokuthi i-FDA, i-LASIK inqubo okufanele ibe inketho kulabo abayifunayo futhi bakhululekile ngobungozi. ezingaba khona. [I-19659002] LASIK, kusho i-Waxler, akufanele futhi ibhekwe njengenketho kubantu abanombono ongalungiswa kalula ngezibuko noma oxhumana nabo. Kwi-FDA, inhlangano igcizelela ukuthi iziguli ezibheka i-LASIK kufanele zihlolwe kahle ukuze ziqiniseke ukuthi zingabantu abafuna ukuhlinzwa.
Umthombo Wezithombe: U-Alf Jonsson / isithombeBROKER
Ama-astronauts e-ISS anangoLwesihlanu ocindezelayo kakhulu kunawe - BGR